res/values-my/strings.xml - platform/packages/apps/ManagedProvisioning - Git at Google
android / platform / packages / apps / ManagedProvisioning / 4cb4d89f3824ccf53a265743a41838d83e23626a / . / res / values-my / strings.xml
blob: 582ff1449cab6a408b4a42af110faea153d3c365 [file] [log] [blame]
<string name="app_label" msgid="1527793174155125990">"အလုပ် စီစဉ်သတ်မှတ်ခြင်း"</string>
<string name="provisioning_error_title" msgid="6320515739861578118">"အူးပ်စ်!"</string>
<string name="setup_work_profile" msgid="1468934631731845267">"အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို စနစ်ထည့်သွင်းမှုပြုလုပ်ပါ"</string>
<string name="company_controls_workspace" msgid="2808025277267917221">"သင်၏ အဖွဲ့အစည်းက ဒီပရိုဖိုင်ကို ထိန်းချုပ်လျက် လုံခြုံအောင် ထားရှိပါသည်။ သင်သည် သင့် ကိရိယာ ထဲက ကျန်အရာများကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။"</string>
<string name="company_controls_device" msgid="8230957518758871390">"သင့်အဖွဲ့အစည်းက ဒီကိရိယာကို ထိန်းချုပ်လျက် လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ပေးမည်။"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm" msgid="6613658218262376404">"အောက်ပါ အက်ပ်က ဒီပရိုဖိုင်ကို ရယူသုံးရန် လိုအပ်မည်:"</string>
<string name="the_following_is_your_mdm_for_device" msgid="6717973404364414816">"အောက်ပါအပ်ဖ်မှ သင့်ကိရိယာကို စီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။"</string>
<string name="next" msgid="1004321437324424398">"ရှေ့သို့"</string>
<string name="setting_up_workspace" msgid="7862472373642601041">"အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နေပါသည်…"</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_profile" msgid="7051310668406162979">"သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူသည် စက်ပစ္စည်း၏တည်နေရာ၊ ယခင်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှာဖွေမှု မှတ်တမ်းများအပြင် သင်၏ ကွန်ရက်လုပ်ဆောင်ချက်များ အပါအဝင် ဆက်တင်များ၊ ပူးပေါင်းအသုံးပြုမှု၊ အက်ပ်များ၊ ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ဤပရိုဖိုင်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ဒေတာများကို စောင့်ကြည့်စီမံနိုင်ပါသည်။<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အပါအဝင် ထပ်မံသိရှိလိုပါက သင့် IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="admin_has_ability_to_monitor_device" msgid="6303112630697870695">"သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူသည် စက်ပစ္စည်း၏တည်နေရာ၊ ယခင်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှာဖွေမှု မှတ်တမ်းများအပြင် သင်၏ ကွန်ရက်လုပ်ဆောင်ချက်များ အပါအဝင် ဆက်တင်များ၊ ပူးပေါင်းအသုံးပြုမှု၊ အက်ပ်များ၊ ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ဤစက်ပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ဒေတာများကို စောင့်ကြည့်စီမံနိုင်ပါသည်။<xliff:g id="LINE_BREAK">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</xliff:g>သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အပါအဝင် ထပ်မံသိရှိလိုပါက သင့် IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="theft_protection_disabled_warning" msgid="3708092473574738478">"သူခိုးရန်မှကာကွယ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်၊ သင့်စက်ပစ္စည်းတွင် စကားဝှက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့် ဖန်သားပြင်လော့ခ်ချခြင်း ရှိရပါမည်။"</string>
<string name="contact_your_admin_for_more_info" msgid="9209568156969966347">"သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးမူဝါဒများအပါအဝင်၊ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် သင့် IT စီမံခန့်ခွဲသူကိုဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="learn_more_link" msgid="3012495805919550043">"ပိုမိုသိလိုလျှင်"</string>
<string name="cancel_setup" msgid="2949928239276274745">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="user_consent_msg" msgid="8820951802130353584">"သဘောတူခွင့်ပြုသည်"</string>
<string name="url_error" msgid="5958494012986243186">"ဤလင့်ခ်ကို ဖော်ပြ၍မရပါ။"</string>
<string name="terms" msgid="8295436105384703903">"စည်းကမ်းချက်များ"</string>
<string name="work_profile_info" msgid="5433388376309583996">"အလုပ်ပရိုဖိုင် အချက်အလက်များ"</string>
<string name="managed_device_info" msgid="1529447646526616811">"စီမံခန့်ခွဲထားသည့် စက်ပစ္စည်းအချက်အလက်များ"</string>
<string name="default_managed_profile_name" msgid="5370257687074907055">"အလုပ် ပရိုဖိုင်"</string>
<string name="default_first_meat_user_name" msgid="7540515892748490540">"ပထမအသုံးပြုသူ"</string>
<string name="delete_profile_title" msgid="2841349358380849525">"လက်ရှိပရိုဖိုင်ကို ဖျက်လိုပါသလား။"</string>
<string name="opening_paragraph_delete_profile" msgid="4913885310795775967">"သင့်တွင် အလုပ်ပရိုဖိုင်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို အောက်ပါ အက်ပ်က စီမံခန့်ခွဲပါသည်-"</string>
<string name="read_more_delete_profile" msgid="7789171620401666343">"ရှေ့မဆက်မှီ၊ "<a href="#read_this_link">"ဖတ်ပါ"</a>"။"</string>
<string name="sure_you_want_to_delete_profile" msgid="6927697984573575564">"သင်ရှေ့ဆက်လျှင်၊ ဤပရိုဖိုင်ရှိ အက်ပ်များနှင့် ဒေတာများအားလုံးကို ဖျက်လိုက်ပါမည်။"</string>
<string name="delete_profile" msgid="2299218578684663459">"ဖျက်ရန်"</string>
<string name="cancel_delete_profile" msgid="5155447537894046036">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_profile_owner_setup" msgid="7828515754696057140">"သင်၏ အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို စနစ်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် အသွင်ဝှက်ထားရပါမည်။ အချိန်အနည်းငယ် ကြာနိုင်သည်။"</string>
<string name="encrypt_device_text_for_device_owner_setup" msgid="5194673142404735676">"ဤစက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ဦးစွာအသွင်ဝှက်ထားရပါမည်။ အချိန်အနည်းငယ် ကြာနိုင်သည်။"</string>
<string name="encrypt_this_device_question" msgid="8719916619866892601">"အသွင်ဝှက်လိုပါသလား။"</string>
<string name="encrypt" msgid="1749320161747489212">"အသွင်ဝှက်ရန်"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_title" msgid="5191449100153186648">"လျှို့ဝှက်ကုဒ် သွင်းမှု ပြီးဆုံးသွားပြီ"</string>
<string name="continue_provisioning_notify_text" msgid="1066841819786425980">"သင့်အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို ရှေ့ဆက်စနစ်ထည့်သွင်းမှု ပြုလုပ်ရန် တို့ပါ"</string>
<string name="managed_provisioning_error_text" msgid="7063621174570680890">"သင်၏ အလုပ် ပရိုဖိုင်ကို စဖွင့်စီစဉ် မရခဲ့ပါ။ သင်၏ IT ဌာနကို ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် နောက်မှာ ထပ်စမ်းပါ။"</string>
<string name="cant_add_work_profile" msgid="9217268909964154934">"အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို ထည့်၍မရပါ"</string>
<string name="cant_replace_or_remove_work_profile" msgid="7861054306792698290">"အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို အစားထိုး သို့မဟုတ် ဖယ်ရှား ၍မရပါ"</string>
<string name="work_profile_cant_be_added_contact_admin" msgid="5393019630297157418">"ဤစက်ပစ္စည်းသို့ အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို ထည့်၍မရပါ။ မေးစရာများရှိလျှင် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="change_device_launcher" msgid="4523563368433637980">"စက်ပစ္စည်း launcher ကို ပြောင်းပါ"</string>
<string name="launcher_app_cant_be_used_by_work_profile" msgid="3524366082000739743">"ဤ launcher အက်ပ်ကို သင်၏ အလုပ်ပရိုဖိုင်အတွက် အသုံးပြု၍မရပါ"</string>
<string name="cancel_provisioning" msgid="3408069559452653724">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="user_setup_incomplete" msgid="6494920045526591079">"အသုံးပြုသူ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှု မပြီးစီးပါ"</string>
<string name="default_owned_device_username" msgid="3915120202811807955">"အလုပ်စက်ပစ္စည်း အသုံးပြုသူ"</string>
<string name="setup_work_device" msgid="6003988351437862369">"အလုပ်စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နေပါသည်…"</string>
<string name="progress_data_process" msgid="1707745321954672971">"ဖွဲ့စည်းပုံအချက်အလက်ကို စီမံဆောင်ရွက်နေသည်..."</string>
<string name="progress_connect_to_wifi" msgid="472251154628863539">"ကြိုးမဲ့အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်နေသည်..."</string>
<string name="progress_connect_to_mobile_network" msgid="3852054186860657088">"မိုဘိုင်းကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်နေသည်…"</string>
<string name="progress_download" msgid="3522436271691064624">"စီမံအုပ်ချုပ်သူ အပ်ဖ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နေသည်..."</string>
<string name="progress_install" msgid="2258045670385866183">"စီမံအုပ်ချုပ်သူ အပ်ဖ်ကို ထည့်သွင်းနေသည်..."</string>
<string name="progress_delete_non_required_apps" msgid="7633458399262691256">"မလိုအပ်သည့် စနစ်အက်ပ်များကို ဖယ်ရှားနေသည်…"</string>
<string name="progress_finishing_touches" msgid="9037776404089697198">"အပြီးသတ်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်…"</string>
<string name="progress_set_owner" msgid="8214062820093757961">"စက်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကို အသင့်သုံးနိုင်ရန်စီစဉ်နေသည်..."</string>
<string name="progress_initialize" msgid="1104643492713424939">"စက်ပစ္စည်းကို စတင်နေသည်…"</string>
<string name="device_doesnt_allow_encryption_contact_admin" msgid="5124643338424539794">"ဤစက်ပစ္စည်းသည် စနစ်ထည့်သွင်းမှုအတွက် လိုအပ်သည့် အသွင်ဝှက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ အကူအညီရယူရန် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="stop_setup_reset_device_question" msgid="7547191251522623210">"စနစ်ထည့်သွင်းမှုကိုရပ်ပြီး စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ် လိုပါသလား။"</string>
<string name="this_will_reset_take_back_first_screen" msgid="4623290347188404725">"၎င်းသည် သင်၏ စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြီး ပထမဆုံးစာမျက်နှာသို့ ပြန်ပို့ပေးပါမည်"</string>
<string name="device_owner_cancel_message" msgid="2529288571742712065">"စဖွင့်စီစဉ်မှုအား ရပ်စဲကာ သင့် ကိရိယာ၏ဒေတာကို ဖျက်ပစ်မည်လား?"</string>
<string name="device_owner_cancel_cancel" msgid="1052951540909389275">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="reset" msgid="6467204151306265796">"ပြန်သတ်မှတ်ရန်"</string>
<string name="cant_set_up_profile" msgid="4341825293970158436">"ပရိုဖိုင်ကို စနစ်ထည့်သွင်း၍ မရပါ"</string>
<string name="cant_set_up_device" msgid="4120090138983350714">"စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်း၍ မရပါ"</string>
<string name="couldnt_set_up_device" msgid="5137950404283642302">"စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်း၍ မရပါ။ အကူအညီရယူရန် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="contact_your_admin_for_help" msgid="2009904021552323731">"အကူအညီအတွက် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ"</string>
<string name="device_already_set_up" msgid="507881934487140294">"စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်းပြီးသား ဖြစ်သည်"</string>
<string name="error_wifi" msgid="1850288843966836571">"Wi-Fi သို့ ချိတ်ဆက်၍ မရပါ"</string>
<string name="device_has_reset_protection_contact_admin" msgid="2662050020376475656">"သင်၏ စက်ပစ္စည်းတွင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှုအား ကာကွယ်ခြင်းစနစ်ကို ဖွင့်ထားပါသည်။ အကူအညီရယူရန် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="frp_clear_progress_title" msgid="8628074089458234965">"ဖျက်နေသည်"</string>
<string name="frp_clear_progress_text" msgid="1740164332830598827">"ခဏစောင့်ပါ..."</string>
<string name="error_hash_mismatch" msgid="1145488923243178454">"ပေါင်းလဒ်စစ်ဆေးမှု အမှားကြောင့် စီမံခန့်ခွဲသူအက်ပ်ကို အသုံးပြု၍မရပါ။ အကူအညီရယူရန် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="error_download_failed" msgid="3274283629837019452">"စီမံခန့်ခွဲသူအက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်၍မရပါ"</string>
<string name="error_package_invalid" msgid="555402554502033988">"စီမံခန့်ခွဲသူအက်ပ်ကို သုံး၍မရပါ။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းအချို့ လိုအပ်နေသည် သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသည်။ အကူအညီရယူရန် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="error_installation_failed" msgid="2282903750318407285">"စီမံခန့်ခွဲသူအက်ပ်ကို ထည့်သွင်း၍မရပါ"</string>
<string name="profile_owner_cancel_message" msgid="6868736915633023477">"စဖွင့်သတ်မှတ်ခြင်း ရပ်စဲမလား?"</string>
<string name="profile_owner_cancelling" msgid="5679573829145112822">"ပယ်ဖျက်နေသည်..."</string>
<string name="work_profile_setup_later_title" msgid="9069148190226279892">"ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အသင့်သုံးနိုင်ရန်စီစဉ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုပါသလား။"</string>
<string name="work_profile_setup_later_message" msgid="122069011117225292">"နောက်ပိုင်းတွင် သင်၏ အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို အဖွဲ့အစည်း၏ စက်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲရေးအက်ပ်တွင် စနစ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်"</string>
<string name="continue_button" msgid="7177918589510964446">"ရှေ့ဆက်ရန်"</string>
<string name="work_profile_setup_stop" msgid="6772128629992514750">"ရပ်ပါ"</string>
<string name="dismiss" msgid="9009534756748565880">"ပိတ်ရန်"</string>
<string name="profile_owner_info" msgid="8975319972303812298">"သင်သည် သင့်အဖွဲ့အစည်းက စောင့်ကြည့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အလုပ်ပရိုဖိုင်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါတော့မည်။ သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers" msgid="7373591910245655373">"သင်သည် သင့်အဖွဲ့အစည်းက စောင့်ကြည့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အလုပ်ပရိုဖိုင်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပါတော့မည်။ <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g> မှ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="profile_owner_info_comp" msgid="9190421701126119142">"အလုပ်အက်ပ်များအတွက် ပရိုဖိုင်တစ်ခု ပြုလုပ်သွားပါမည်။ ဤပရိုဖိုင်နှင့် သင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို သင့်အဖွဲ့အစည်းက စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="profile_owner_info_with_terms_headers_comp" msgid="2012766614492554556">"အလုပ်အက်ပ်များအတွက် ပရိုဖိုင်တစ်ခု ပြုလုပ်သွားပါမည်။ ဤပရိုဖိုင်နှင့် သင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို သင့်အဖွဲ့အစည်းက စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။ <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%1$s</xliff:g> မှ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ အကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="device_owner_info" msgid="3716661456037934467">"ဤစက်ကို <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> က စီမံခန့်ခွဲ၍ စောင့်ကြည့်ပြီး လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်သွားပါမည်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ရှိပါသည်။ <xliff:g id="VIEW_TERMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="device_owner_info_with_terms_headers" msgid="1254243288669282977">"ဤစက်ကို <xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> က စီမံခန့်ခွဲ၍ စောင့်ကြည့်ပြီး လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်သွားပါမည်။ <xliff:g id="TERMS_HEADERS">%2$s</xliff:g> မှ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ <xliff:g id="VIEW_TERMS">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="link_isnt_secure_and_cant_be_opened_until_device_setup_finished" msgid="1604497932637832657">"ဤလင့်ခ်က လုံခြုံမှုမရှိသောကြောင့် စက်ပစ္စည်း စနစ်ထည့်သွင်းမှု မပြီးမချင်း ဖွင့်၍ရမည် မဟုတ်ပါ− <xliff:g id="LINK_RAW_TEST">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="contact_device_provider" msgid="2843488903902493030">"ပိုမိုလေ့လာရန် သင့် <xliff:g id="IT_ADMIN">%1$s</xliff:g> ကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="if_questions_contact_admin" msgid="3509427015901582047">"မေးစရာများရှိလျှင် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ"</string>
<string name="setup_isnt_finished_contact_admin" msgid="8849644190723875952">"စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း မပြီးသေးပါ။ အကူအညီရယူရန် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="for_help_contact_admin" msgid="5922538077702487859">"အကူအညီရယူရန် သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ"</string>
<string name="organization_admin" msgid="5975914478148511290">"IT စီမံခန့်ခွဲသူ"</string>
<string name="your_org_app_used" msgid="5336414768293540831">"<xliff:g id="YOUR_ORGANIZATION">%1$s</xliff:g> သည် အောက်ပါအက်ပ်ကို သုံးပြီး ဤစက်ပစ္စည်းကို စောင့်ကြည့်စီမံခန့်ခွဲသွားပါမည်−"</string>
<string name="your_organization_beginning" msgid="5952561489910967255">"သင်၏အဖွဲ့အစည်း"</string>
<string name="your_organization_middle" msgid="8288538158061644733">"သင်၏အဖွဲ့အစည်း"</string>
<string name="view_terms" msgid="7230493092383341605">"စည်းကမ်းချက်များ ကြည့်ရန်"</string>
<string name="accept_and_continue" msgid="1632679734918410653">"လက်ခံပြီး ရှေ့ဆက်ရန်"</string>
<string name="back" msgid="6455622465896147127">"နောက်သို့"</string>
<string name="set_up_your_device" msgid="1896651520959894681">"သင့်စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ"</string>
<string name="info_anim_title_0" msgid="3285414600215959704">"သင်အလုပ်လုပ်နည်းကို ပြောင်းလဲစေပါသည်"</string>
<string name="info_anim_title_1" msgid="2657512519467714760">"အလုပ်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ခွဲခြားပါ"</string>
<string name="one_place_for_work_apps" msgid="2595597562302953960">"အလုပ်အက်ပ်များအတွက် နေရာတစ်နေရာ"</string>
<string name="info_anim_title_2" msgid="4629781398620470204">"ပြီးသွားလျှင် အလုပ်ကို ပိတ်လိုက်ပါ"</string>
<string name="provisioning" msgid="4512493827019163451">"စီမံဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။"</string>
<string name="copying_certs" msgid="5697938664953550881">"CA လက်မှတ်များကို တည်ဆောက်ခြင်း"</string>
<string name="setup_profile" msgid="5573950582159698549">"သင့်ပရိုဖိုင်ကို သတ်မှတ်ပါ"</string>
<string name="profile_benefits_description" msgid="758432985984252636">"အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒေတာများနှင့် အလုပ်ဒေတာများကို ခွဲထားနိုင်ပါသည်"</string>
<string name="comp_profile_benefits_description" msgid="379837075456998273">"အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို သုံးခြင်းဖြင့် အလုပ်သုံးအက်ပ်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းထားနိုင်သည်"</string>
<string name="setup_profile_encryption" msgid="5241291404536277038">"သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုအသင့်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ပါ။ လျှို့ဝှက်ကုဒ်သွင်းခြင်း"</string>
<string name="setup_profile_progress" msgid="7742718527853325656">"သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို အသင့်သုံးနိုင်ရန်စီစဉ်ပါ။ တိုးတက်မှုကိုဖော်ပြပါ"</string>
<string name="setup_device" msgid="6725265673245816366">"သင်၏ ကိရိယာကို စဖွင့်သတ်မှတ်ရန်"</string>
<string name="setup_device_encryption" msgid="7852944465414197103">"သင့်ရဲ့စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်စီစဉ်ပါ။ လျှို့ဝှက်ကုဒ်သွင်းခြင်း"</string>
<string name="setup_device_progress" msgid="7035335208571175393">"သင့်ရဲ့စက်ပစ္စည်းကိုအသင့်သုံးနိုင်ရန်စီစဉ်ပါ။ တိုးတက်မှုကိုဖော်ပြပါ"</string>
<string name="learn_more_label" msgid="2723716758654655009">"ခလုတ်များအကြောင်းထပ်လေ့လာပါ"</string>
<string name="mdm_icon_label" msgid="3399134595549660561">"<xliff:g id="ICON_LABEL">%1$s</xliff:g> ကိုယ်စားပြုရုပ်ပုံ"</string>
<string name="section_heading" msgid="3924666803774291908">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> ကဏ္ဍခေါင်းစီး။"</string>
<string name="section_content" msgid="8875502515704374394">"<xliff:g id="SECTION_HEADING">%1$s</xliff:g> ကဏ္ဍပါ အကြောင်းအရာ− <xliff:g id="SECTION_CONTENT">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="expand" msgid="37188292156131304">"ချဲ့ရန်"</string>
<string name="collapse" msgid="7817530505064432580">"လျှော့ပြရန်"</string>
<string name="access_list_of_links" msgid="7094123315959323372">"လင့်ခ်စာရင်းကို ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="access_links" msgid="7991363727326168600">"လင့်ခ်များကို ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="access_terms" msgid="1982500872249763745">"စည်းမျဉ်းများကို ဖွင့်ရန်"</string>
<string name="read_terms" msgid="1745011123626640728">"စည်းမျဉ်းများ ဖတ်ပါ"</string>
<string name="close_list" msgid="9053538299788717597">"စာရင်းကို ပိတ်ပါ"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_title" msgid="5416045931532004811">"စနစ်ထည့်သွင်းမှု အဆုံးသတ်ပြီး စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်မလား။"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_msg" msgid="808442439937994485">"ဤစနစ်ထည့်သွင်းမှုကို အဆုံးသတ်ခြင်းသည် သင့်စက်ပစ္စည်းကို စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာသို့ ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_cancel" msgid="2810966091829264727">"မလုပ်တော့"</string>
<string name="cancel_setup_and_factory_reset_dialog_ok" msgid="7168008267496150529">"စက်ပစ္စည်းကို မူလဆက်တင်သို့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ"</string>
<string name="join_two_items" msgid="6110273439759895837">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g> နှင့် <xliff:g id="SECOND_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_last" msgid="7469666990442158802">"<xliff:g id="ALL_BUT_LAST_ITEM">%1$s</xliff:g> နှင့် <xliff:g id="LAST_ITEM_0">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_first" msgid="8365482726853276608">"<xliff:g id="FIRST_ITEM">%1$s</xliff:g>၊ <xliff:g id="ALL_BUT_FIRST_AND_LAST_ITEM">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="join_many_items_middle" msgid="8569294838319639963">"<xliff:g id="ADDED_ITEM">%1$s</xliff:g>၊ <xliff:g id="REST_OF_ITEMS">%2$s</xliff:g>"</string>
<string name="take_a_few_minutes" msgid="6282806501305322838">"မိနစ်အနည်းငယ် ကြာနိုင်ပါသည်"</string>
<string name="work_profile_description" msgid="8524116010729569213">"အလုပ်အက်ပ်များကို ဤပရိုဖိုင်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏အဖွဲ့အစည်းက စီမံခန့်ခွဲပါမည်"</string>
<string name="device_owner_description" msgid="168013145812679664">"ဤစက်ပစ္စည်းကို သင်၏ အဖွဲ့အစည်းက လုံခြုံအောင်ထားပြီး စီမံခန့်ခွဲသွားပါမည်"</string>
<string name="setup_provisioning_header" msgid="4282483198266806271">"အလုပ်သုံးကိရိယာ စနစ်ထည့်သွင်းရန် ပြင်ဆင်နေသည်…"</string>
<string name="setup_provisioning_header_description" msgid="2567041263563823566">"စီမံခန့်ခွဲသူအက်ပ် စနစ်ထည့်သွင်းနေသည်"</string>
<string name="set_up_everything_else" msgid="4407706086957916501">"အားလုံးကို စနစ်ထည့်သွင်းရန်"</string>
<string name="now_lets_set_up_everything_else" msgid="2905102208584231894">"အားလုံးကို စနစ်ထည့်သွင်းလိုက်ရအောင်"</string>
<string name="brand_screen_header" msgid="8865808542690116648">"ဤစက်ကို သင့်အဖွဲ့အစည်းက ပိုင်ဆိုင်သည်"</string>
<string name="brand_screen_subheader" msgid="7664792208784456436">"အောက်ပါအက်ပ် အသုံးပြု၍ ဤဖုန်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါမည်"</string>
<string name="downloading_administrator_header" msgid="8660294318893902915">"အလုပ်ဆိုင်ရာ စနစ်ထည့်သွင်းမှုအတွက် အသင့်ပြင်နေသည်…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header" msgid="462916780311392444">"သင့်အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို အရင် စနစ်ထည့်သွင်းရအောင်"</string>
<string name="work_profile_provisioning_accept_header_post_suw" msgid="1353127953275291089">"သင့်အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို စနစ်ထည့်သွင်းကြပါစို့"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_1_header" msgid="7914961694921466366">"အလုပ်သုံးအက်ပ်များကို သင့်အလုပ်ပရိုဖိုင်တွင် သိမ်းထားသည်"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_2_header" msgid="6001172190404670248">"တစ်နေ့တာအပြီးတွင် အလုပ်သုံးအက်ပ်များကို ခဏရပ်နိုင်သည်"</string>
<string name="work_profile_provisioning_step_3_header" msgid="7495564624887776704">"သင့်အလုပ်ပရိုဖိုင်အတွင်းရှိ ဒေတာများကိုသာ သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူက မြင်ရပါသည်"</string>
<string name="work_profile_provisioning_progress_label" msgid="2627905308998389193">"သင်၏အလုပ်ပရိုဖိုင်ကို ထည့်သွင်းနေသည်…"</string>
<string name="work_profile_provisioning_summary" msgid="3917907344897144246">"အလုပ်သုံးအက်ပ်များကို သင့်အလုပ်ပရိုဖိုင်တွင် သိမ်းထားသည်/ တစ်နေ့တာအပြီးတွင် သင့်အလုပ်သုံးအက်ပ်များကို ခဏရပ်နိုင်သည်။ သင့်အလုပ်ပရိုဖိုင်အတွင်းရှိ ဒေတာများကိုသာ သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူက မြင်ရပါသည်။"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_accept_header" msgid="2944032660440403130">"သင့်အလုပ်သုံး စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်းရအောင်"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_1_header" msgid="6396274703116708592">"သင့်အလုပ်သုံးအက်ပ်များကို အလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပါ"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_header" msgid="7165472083121590030">"ဤစက်ပစ္စည်းသည် သီးသန့်မဟုတ်ပါ"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_step_2_subheader" msgid="2848998570491578119">"သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူက ဤစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ သင့်ဒေတာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_progress_label" msgid="3925516135130021966">"သင့်စက်ပစ္စည်း စနစ်ထည့်သွင်းနေသည်…"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_summary" msgid="1176062866187662479">"သင့်အလုပ်သုံးအက်ပ်များကို အလွယ်တကူ ဝင်သုံးရန် ဤစက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုပါ။ ဤစက်ပစ္စည်းသည် သီးသန့်မဟုတ်သဖြင့် သင့် IT စီမံခန့်ခွဲသူက သင့်ဒေတာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန် သင့် IT စီမံခန့်ခွဲသူကို ဆက်သွယ်ပါ။"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_title" msgid="4017627906103556021">"ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှု သတိပေးချက်"</string>
<string name="fully_managed_device_provisioning_privacy_body" msgid="2219074604343348608">"သင်၏ IT စီမံခန့်ခွဲသူက ဤစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ သင့်ဒေတာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြင်နိုင်ပါသည်"</string>
<string name="device_provisioning_finished" msgid="3981783240592092906">"သင့်စက်ပစ္စည်းကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။"</string>
<string name="done" msgid="7755227776955952318">"ပြီးပြီ"</string>